Futa ဂိမ်းများအတွက်:အခမဲ့-အခြေခံ Shemale လိုးကားဂိမ္း
ရှာဖွေနေခဲ့ကြအားလုံးအင်တာနက်ကိုကျော်အရည်အသွေးကောင်း futanari အရေးယူ? ကောင်းစွာ၊ရှာဖွေရေးကိုရပ်လိုက်ချိန်မှာမိတ်ဆွေ! ကြၽန္ေနောက်ကွယ်မှကောင်လေး Futa ဂိမ်းများနှင့်ကျွန်တော်အမှန်တကယ်ပျော်ရွှင်နိုင်မှအစီရင်ခံဖို့ဒီနေ့ကျနော်တို့အပူဆုံးစုဆောင်းခြင်း playables အတွင်းကသွားအောင်သင်အလွန်ပျော်ရွှင်အမှန်ပင်။ ငါမြော်လင့်ခြင်းသင်သား၏အမဲသားကိုထားထုတ်သောကြောင့်၊လေး–အကြောင်းအရာဖြစ်သွားများအတွက်အသုံးပြုလာမည့်ရက်အနည်းငယ်အလိုမှာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်! သောသူတို့အဘို့မဟုတ်လွန်းနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ဝေါဟာရကိုဒီမှာပါ:futa ကိုရည်ညွှန်း Futanari၊အရာဖြစ်၏စတိုင်လိုးကားပါဝင်သောအမျိုးသမီး/အမျိုးသားစပ္တစ္မ်ိဳးေ။, သူတို့ကလုံးဝနီးပါးအမြဲဣတ္နှအတွက်အသွင်အလွဲအခါထပ်သွားပြီးမြင်ကြပြီကောင်းတဲ့အရည်ရွှမ်း cocks ကြောင်းသင်စို့! ဒါကအခြေခံအားဖြင့်အမည်-အားလုံးနှင့်အဆုံးအားလုံး၏Futa ဂိမ်းများနှင့်အကြှနျုပျတို့သညျဖို့မျှော်လင့်နိုင်ဖြစ်ခြင်းသင်အစေခံနှင့်အတူအတိအကျအမျိုးအစားအရွယ်ရောက်ပြီးသောပစ္စည်းသင်တို့အဘို့အရှာနေ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးကြည့်ပါ:အဘယ်မှာရှိအခြားအွန်လိုင်းသင်၏လက်ကိုအပေါ်ဂိမ်းများဖြစ်ကြောင်းသတင်း၌ဤအထူးသဖြင့်ဒိုမိန်း? ဒါဟာအထူးအနည်းငယ်စုဆောင်းထံမှအဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ပြောနိုင်၊အဆိုပါပြိုင်ဆိုင်မှုအစားအသေးစားနှင့်အရွည္ pickings။, ယခုအခါ–ပြောကြရကြောင်းပိုမို Futa ဂိမ်းများတဲ့ပလက်ဖောင်းအဖြစ်နှင့်အားလုံးအကြောင်းပြချက်များအဘယ်ကြောင့်သင်ချင်စေခြင်းငှါတက်လက်မှတ်ထိုးရန်။
ကျွန်တော်တို့တစ်ဦးနဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဂရပ်ဖစ်ဒီချဉ်းကပ်မှုအပေါ် Futa ဂိမ်းအကြောင်းသင်ဖြစ်နိုင်အချိန်နှင့်အချိန်နောက်တဖန်အတွက်ခေတ်ရေစီးပြားေ–သာဘယ်တော့မှမမှကြွလာသောအခါအအရွယ်ရောက်ပြီးထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ။ အသင်းကိုဖူးကဲ့သို့ခံစားခဲ့ရသည့်တာဝန်ကြောင်းသေချာစေရန်အရည်အသွေး၏အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့စားပွဲပေါ်မှာမှဆောင်ခဲ့သည်ဝေးနှင့်ကျော်လွန်ဘာမှမထွက်ရှိအင်တာနက်ပေါ်မှာ။, ကျွန်တော်သတ္တိရှိခဲ့ဆွဲထုတ်ဖို့ခလုတ်ပေါ်တွင်အလွန်စျေးကြီးတဲ့အင်ဂျင်ကအပူဆုံးအမြင်ဖြစ်နိုင်နှင့်ခွင့်ပြု၊ကျွန်ုပ်တို့၏အပြုအချို့သောအမှန်တကယ်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အရာအားလုံးအတွက်အကြောဂိမ်းကစားထွက်ရှိချင်သောသူ၎င်းတို့၏နေ့စဉ်ဆေးထိုးတြန္းညမ်း shemale ကောင်းမြတ်ခြင်း။ အဆိုပါစနစ်အားလုံး၍ဒါကြောင့်ပင်လျှင်သင်ချိတ်ဆက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆာဗာနှင့်အတူထက်လျော့နည်းပြီးပြည့်စုံသောစက်၊သင်ဆဲကိစ္စရပ်များရှိသည်သမျှအပြေး။, အများကြီးကိုပြုကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆုံးအပေါ်ကြောင်းသေချာစေရန်သင်အကောငျးဆုံးအရည်အသွေးအကြောင်းအရာ–အဘယ်သူမျှနှင့်အတူသောက်သုံးစေခြင်းငှါပုံမှန်ဖို့မျှော်လင့်နှင့်အတူလာ! ဤခေါင်းစဉ်အမှန်တကယ်ပျော်စရာကြည့်ရှုရန်နှင့်ကစားပြီးနောက်သူတို့ကိုအနည်းငယ်နေ့ရက်ကာလအဘို့၊သင်သွားချင်တယ်ဘယ်တော့မှပြန်ခြင်းဝန်ဆောင်မှု။ ရှိသည်ဖို့သေချာမှာလျင်မြန်တဲ့အကြည့်ခရီးစဉ်ကိုဒီနေရာမှာနှင့်ကိုယ်အဘို့မြင်အာရုံရှိသည်အရည်အသွေးပေါ်ကျော်အခြားအရာခပ်သိမ်း။ တော်တော်အထင်၊လက်ျာ?
အောင်တတ်နိုင်သမျှကြောင့်လွယ်ကူရန်အဘို့အသင်အမှန်တကယ်ကစားဂိမ်းကျနော်တို့ရရှိပါသည်၊အသင်းရှိပါတယ်ထုတ်ဝေဖို့ဆုံးဖြတ်ထိုသူအပေါင်းတို့သည်တဆင့်ရာက္ဇာ။ အဘယျသို့ကဒီမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့နည်းလမ်းအကြောင်းသင်ပါလိမ့်မယ်ကစားအသုံးပြုပြီး Chrome၊မြေခွေးမှာသို့မဟုတ်ဆာဖာရီ။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးသုံး၊ဒါကြောင့်သင်သည်အဘယ်မျှကာလပတ်လုံးတစ်ဦးမိတ္တူရှိသည်ကြောင်းသိရသည်ဖာအတွင်းနောက်ဆုံး ၁၈ လသို့မဟုတ်ဒီတော့၊သင်သင့်သွားကြဖို့ကောင်းပါတယ်။ ဒီစကိုဆိုလိုတယ်မိုဘိုင်းဂိမ်းကစားရနိုင်မိမိတို့၏တစ်ဦးအချပ်ကိုပိုင်လျှင်သူတို့ချင်တယ်အဖြစ်–ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အဒီနေရာမှာသင့်ရဲ့အပျော်အပါးနှင့်သေချာအောင်ဖို့တတ်နိုင်သမျှလူများစွာခံစားနိုင်သည်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိသည်!, ဒီစချဲ့ထွင်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေခြင်းဖြစ်ကြောင်းပေါ်သို့မဟုတ် MacOS လည်ပတ်စနစ်များ:သင်ရှိသည်ဖို့တာပေါ့အဘယ်သူမျှမကိစ္စရပ်များကိုကစားဂိမ္းမ်ား၊ေကတည်းကဒါဟာအားလုံးမှတဆင့်ပြုသောအရာက္ဇာ! ပါကစနှင့်အတူကြွလာ၏ထည့်သွင်းအကျိုးကျေးဇူးများအားလုံး၏တိုးတက်မှုဖြစ်ခြင်းသည်ကယ်တင်ခြင်းအတွက်အတိမ်အနက်အဓိပ္ပာယ်၊သင်လမ်းကြောင်းစောင့်ရှောက်ရန်မလိုပါ၏ပြည်တွင်းဖြစ်ဖိုင်တွေ။ ဒါဟာအစဖို့ခွင့်ပြုဤနေရာသို့သွားရန်ဖြောင့်သို့အပြာဂိမ္းေဖ်ာ္ေျဖေရးစောင့်ဆိုင်းခြင်းမရှိဘဲ–တော်တော်ချိုမြိန်၊မှန်သော?
ကြိုးစားကျွန်တော်တို့ရဲ့ Futa ဂိမ်းယနေ့
လျှင်သင်၏အိုင်ဒီယာကိုချစ်ဂိမ်းကစားကပတ်ပတ်လည်အခြေ futanari၊သင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်အခုအချိန်မှာဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ကိုပူးပေါင်းဖို့ရန်။ ကျွန်မရှင်တို့ကိုကတိပေးတယ်ဆိုတာအပေါ်အခြေခံပြီးအားလုံးအကြံပေးရန်ကျနော်တို့ဤသို့ဝေးရှိပါတယ်၊အဘယ်သူမျှမပိုကောင်းတဲ့စက်အပြောက်များအတွက်အွန်လိုင်းကလူနှင့်အတူတစ်ဦးအစွဲအ futanari ဂိမ်းကစားမိမိတို့လက်ရရန်သည်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိသည်။ ကျနော်တို့အပြည့်အဝယုံကြည်ကြောင်းကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးထုတ်ကုန်ထွက်ရှိပြီးကျွန်တော်ကြည့်ဖို့မျှော်လင့်နိုင်ဖြစ်ခြင်းကိုပြသောနောက်နှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်အလုပ်၏ဤလိုင်း၊ကျွန်တော်ကယ်မလွှတ်နိုင်သည့်အတွေ့အကြုံကအရမ်းလူအနည်းငယ်ကအမှန်တကယ်စဉ်းစားခဲ့သည်။, ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျေးဇူးအများကြီးစာဖတ်ခြင်းများအတွက်–ငါရှေ့ဆက်သွားနှင့်ယခုသင်ပြောပြရန်တက်လက်မှတ်ထိုးနိုင်အောင်သင်နှစ်သက်အင်တာနက်ရဲ့အကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးလိုးကားဂိမ္းကပတ်ပတ်လည်အခြေ shemales နှင့်ထောင်ချောက်။
လာရောက်လည်ပတ်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Futa ဂိမ္း:အကောင်းဆုံးအစက်အပြောက်များအတွက်အွန်လိုင်း XXX ဂိမ်းကစားနှင့်အတူ futanari လိမ်။